အခုခေတ်လူတော်တော်များများမသိတဲ့ သစ်တစ်ချောင်းကို ဘယ်ဈေးရောင်းရမလဲ တွက်နည်း၊ ဘိလပ်မြေတွက်နည်း -
ရေဂါလံ တွက်နည်း နှင့် မြေဧက တွက်နည်း၊ သစ်တစ်ချောင်းကို ဘယ်ဈေးရောင်းရမလဲ တွက်နည်းများ
ရေ၀င်ဆန့်တွက်နည်း ၊ သစ်တွက်နည်း ၊ မြေတွက်နည်း ၊ ဘိလပ်မြေတွက်နည်း
အုတ်ရေကန်ဝင်ဆန့်မှု တွက်ချက်နည်းကပိုလွယ်ပါတယ် အလျား×အနံ×အမြင့်=ကုဗပေ ရတယ်
အဲဒီကုဗပေနဲ့ ၁ ကုဗပေမှာ ရေ ၆•၂၅ ဂါလံ နဲ့ မြှောက် ရတာဝင်ဆန့်တဲ့ ရေဂါလံပေါ့
မြန်မာလက်သမားတို့၏သစ်တွက်နည်းဝေမျှပါသည်။ သစ်တစ်တန်=၄၀၀လက္မ သတ်မှတ်ပါသည်။ ဥပမာ ၂”X၁”( အရှည်၁၈ ပေ)=၂”ဟုသတ်မှတ်သည်။
၄၀၀ ÷၂= ၂၀၀ ထို့ကြောင့် ၂”၁”(အရှည်၁၈ပေ) ၂၀၀ ချောင်းသည် တစ်တန်ဖြစ်သည်။ ၂”၁”(အရှည်၁၈ပေ) ၂၀၀ ချောင်းသည် တစ်တန်ဖြစ်သည်။ ၃”၁”=၃”(အားလုံးပေရှည် ၁၈ပေမှတ်ယူရပါမည်)
၄”၁”=၄”(၁၀၀ချောင်း) ၅”၁”=၅”(၄၀၀စား၅ (၈၀ချောင်း) ၆”၁”=၆”(၆၆.၆ ချောင်း) ၊ ၃”၀.၅”=၁.၅”(၂၆.၆၆ ချောင်း) ၄”၀.၅”=၂”(၂၀၀ ချောင်း) ၄”x၄”=၁၆ လက္မ(၂၅ ချောင်း)
၅”x၅”=၂၅လက္မ(၁၆ ချောင်း) ဥပမာ။တန်ဘိုး တစ်တန်=၄၀၀၀၀၀ကျပ် ၊ ၄၀၀၀၀၀%၄၀၀= ၁၀၀၀ ကျပ်(၁”တန်ဘိူးဖြစ်သည်)် ၂”x၁၀၀၀=၂၀၀၀၀ကျပ်(၂”၁” ၁၈ပေတစ်ချောင်း၏တန်ဘိုးဖြစသည်။်
ဥပမာ … သစ်တစ်တန် ၆၅၀၀၀၀ ဈေးဖြင့် ၄”x၂ ” (လေးနှစ်) ၁၈ ပေ တစ်ချောင်း တန်ဖိုးကို တွက်ကြည့်မယ် ဈေးနှုံး ကိုတည် ဒသမ သုညသုည နှစ်ငါး ဖြင့်မြှောက် (၆၅၀၀၀၀ × •၀၀၂၅ )၊ ရလဒ်ကို သစ် ချောင်း ၏ ဒု × ဗျက် (၄”×၂”) ရလဒ်ဖြင့် ပြန် မြှောက်လိုက်ပါ
ဒါဆို ၄” × ၂” (လေးနှစ်) ၁၈ပေ တစ် ချောင်း၏ တန်ဖိုး ရပါပြီ….၆၅၀၀၀၀× .၀၀၂၅ = ၁၆၂၅၊ ၄× ၂ = × ၈
၁ ၃၀၀၀ လေးနှစ်တစ်ချောင်းတန်ဖိုး ၁၃၀၀၀ ဖြစ်ပါသည်…မည်သည့် ဒု ဗျက် မည်သည့် ဈေး နှုံး မဆို တွက်ကြည့် နိုင်ပါ သည်။
ဘိလပ်မြေ အုတ်သဲကျောက် ဘယ်လောက်ကုန်မလဲ မေးတတ်လို့ အကြမ်းတွက်လို့ရအောင်ပါ။ မြန်မာပြည် ဆောက်လုပ်ရေးမှာ ကျင်းနဲ့ ပြောကြပါတယ်။ ကုဗကျင်းနဲ စကွဲယားကျင်း ဆိုပြီးရှိပါတယ်။
ကုဗကျင်းက အလျား အနံ အမြင့် ၃ ခု မြှောက်တာပါ။ ၃ ခုမြှောက်လို့ ၁၀၀ ရရင် ၁ ကျင်းပါ။ ၅၀ ဆို ကျင်းဝက် ၂၅ ဆို ကျင်းတစ်မတ် စသဖြင့်ပါ။ ကုဗကျင်းကို ၉ လက်မနဲ့အထက် အုတ်စီခြင်းတို့ ကွန်ကရစ်လောင်းခြင်းတို့ မြေကြီးတူးခြင်းတို့မှာ အများဆုံးသုံးပါတယ်။
ရှိသမျှအလျားအနံအမြင့်တွေ လိုက်မြှောက် ပေါင်းလိုက်ရင် ကုဗကျင်းထွက်လာပါပြီ။ မြေကြီး၁ ကျင်းဆို ၁၀ပေပတ်လည် ၁ ပေ အနက် ရှိရပါမယ်။
1:3:6 အချိုး ကွန်ကရစ် ဘိလပ်မြေ ၁၃ အိတ်ခန့် သဲကျင်းဝက် ကျောက် ၁ ကျင်း 1:2:4 အချိုး ကွန်ကရစ် ဘိလပ်မြေ ၁၈ အိတ်ကျော်ခန့် သဲကျင်းဝက် ကျောက် ၁ ကျင်း 1: 1-1/2 အချိုး ကွန်ကရစ် ဘိလပ်မြေ ၂၅ အိတ်ခန့် သဲကျင်းဝက် ကျောက်၁ ကျင်းအုတ်ဖိနပ်တွေမှာ အသုံးများတဲ့ ၉ လက်မအထက် အုတ်စီခြင်း ကုဗတစ်ကျင်းဆို ၁၃၅၀ လုံးဘိလပ်မြေကတော့ သုံးတဲ့အချိုးမှာမူတည်ပါတယ်။
အများသုံးတဲ့ 1:4 အချိုးဆို ဘိလပ်မြေ ၆ အိတ်နီးပါး။ သဲ ၂၈ ကျင်းတစ်မတ် သာသာလောက်။ စကွဲယားကျင်း အလျားနဲ့ အနံ ပဲမြှောက်ပြီး ၁၀၀ ဆို ၁ ကျင်း။ ၄လက်မခွဲ အုတ်စီခြင်း ဆေးသုတ်ခြင်းတို့ အမိူးမိုးခြင်းတို့ ကြွေပြားကပ်ခြင်းတို့မှာ သုံးပါတယ်။
နံရံတွေမှာ အသုံးများတဲ့ ၄.၅ လက်မ အုတ်စီခြင်း မှာ အုတ် ၅၅၀ လုံး1:4 အချိုး ဘိလပ်မြေ 2.7 အိတ် သဲ .11 ကျင်းသံချောင်းတစ်ချောင်းဟာ ဆိုက်မှန်ပါက ပေ ၄၀ ၁၂ မီတာရှိရပါတယ်။
သို့ပေမယ့် ၃၉ပေ ၆ လက်မလောက်ဆို မှန်တယ်ပြောရပါမယ်။ ဘာမားဖြစ်ကတော့ အတိအကျပြောလို့ မရပါဘူး။
တစ်တန်မှာရှိရမယ့် အချောင်းရေက 10 မီလီ ၃မူး ( ၃/၈) မှာ ပေ၄၀ အရှည် ၁၃၅ ချောင်း ၊ ၁၂ မီလီ ၅မူး ( 1/2) မှာ ၈၈ ချောင်း ၁၆ မီလီ ၆မူး ( 5/8) မှာ ၅၃ ချောင်း ၊ ၂၀ မီလီ ၃မတ် (3/4) မှာ ၃၃ ချောင်း ၊ ၂၅ မီလီ ကျပ်လုံးမှာ (1) မှာ ၂၁ ချောင်းရှိပါတယ်။
ဘိလပ်မြေ ၁ အိတ်ဟာ ၅၀ ကီလိုလေးပြီး အိတ်၂၀ ဟာ ၁ တန်ပါ။ သံချောင်းတွေဆက်ဖို့လိုရင် တိုင်တွေမှာ အနည်းဆုံး အဆ ၄၀ ထပ်မိနေစေ ရပါမယ်။ ထုပ်တွေ ယက်မတွေမှာတော့ အဆ ၆၂ လောက်ထိသုံးတတ်ပါတယ်။ ခိုချင်ရင်တော့ ၅၀ဆလောက် ဆို ရလောက်ပါတယ်။
အခုနောက်ပိုင်း မီတာနဲ့သုံးလာပါတယ်။ ဆက်သွယ်ချက်က၁မီတာ 1M မှာ ၃ ပေ ၃ လက်မ ၃ မူးရှိပါတယ်။ လက်သမားနဲ့ ယှဉ်ပြောလို့ရတဲ့အခေါ်ပါ။ 1 M မီတာ= 3.281 ပေ ၊ 1 လက်မ= 25.4 mm မီလီမီတာ1 ( 1m X 1m) မီတာ စကွဲယား= 10.78 ပေစကွဲယား
ကွန်ကရစ် 1 (1mX 1mX 1m) မီတာကျု = 35.32 ကုဗပေ Cuftရေကန်တစ်ခု ရေဂါလံ ဘယ်လောက်ရှိလဲတွက်ချင်ရင်၁ကုဗပေမှာ ၆.၂၄ ဂါလံရှိပါတယ်။
အလျား အနံ အမြင့် တစ်ပေစီရှိတဲ့ ပုံးတစ်လုံးဟာ ရေ ၆.၂၄ ဂါလံဆန့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၆ပေအလျား ၄ ပေအနံ ၃ ပေ အမြင့်ရှိတဲ့ရေကန်ဟာ6 X4X3X 6.24=449.28ရေ ၄၅၀ ဂါလံဆန့်ပါတယ်။
ရေတစ်ဂါလံ ၁၀ ပေါင်လေးလို့ ၄၅၀၀ ပေါင်လေးပါတယ်။ ၂၂၄၀ ပေါင် ၁ တန်လေးလို့ ၂ တန်လောက် အလေးချိန်ရှိပါမယ်။ ရေကန်ကို အပေါ်မှာ ထားရင် dead load ဝန်သေ ၂ တန်ကို ခံနိုင်အောင် သံချောင်း ကော်လံတိုင် ဆိုဒ် ကို သုံးရပါမယ်။ တွက်တတ်လားမေးရင်တော့မသိပါဘူး။
1 ဂါလံမှာ ၄.၅၄၆ လီတာရှိပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း စတီးရေတိုင်ကီတွေက လီတာနဲ့ ပြထားတတ်လို့ ပြန်တွက်ကြည့်လို့ရပါလိမ့်မယ်။ သစ်တစ်တန်ဟာ၁လက်မပတ်လည် မှာ( 1 X 1) မှာ ၇၂၀၀ ပေ အရှည်ရှိရပါမယ်။ ၂X၁ နှစ်တစ် တစ်တန်ဟာ ( 7200÷2= 3600 ပေအရှည်)3 X2တစ်တန် ( 7200÷6=1200 ပေအရှည်)စသဖြင့် တွက်ယူကြည့်ပါ။
(၄) မြေတွက်နည်း မြေဧက ဖွဲ့နည်း တွက်နည်း
တစ်ဧက = ၄၃၅၆၀ စတုရန်းပေ ၊ လေးနားညီ စတုရန်း= လျား ၂၀၈.၇၁ ပေ x နံ ၂၀၈.၇၁ ပေ။
နှစ်နားညီ စတုဂံ = လျားxနံ ÷ 43560နှစ်နားပြိုင် တြာဗီဇီယံ = ပြိုင်နား နှစ်ခုပေါင်း ÷၂ x နံ ÷ 43560
တိဂံ = .၅xအခြေxအမြင့် ÷ 43560 ၊ တြိဂံ = ½ အခြေxအမြင့် ÷ 43560
ထောင့်မှန် တြိဂံ – အခြေxအမြင့် = ရလာဒ် ÷ ၂ ÷ 43560 ၊ စက်ဝိုင်း – အချင်းဝက်x အချင်းဝက်x 3.1416 ÷ 43560
စက်ဝိုင်း – အချင်းxအချင်းx .၇၈၅၄ ÷ 43560 ၊ပုံသေ မြှောက်ကိန်း .၇၈၅၄.၇၈၅၄ သည် ပိုင်ကိန်း ၃.၁၄၁၆ ကို (အနားလေးဖက်) ၄ နှင့်စားပြီး စတုရန်းကွက် ဖေါ်သည်။
အနားငါးမျက်နှာ ၆မျက်နှာနှင့် အနားများစွာ = စတုဂံ စတုရန်း တြိဂံစသည် အကွက်စိပ် ပြီးတွက် ရလာဒ်အားလုံးကိုပေါင်း၍ ၄၃၅၆၀ ဖြင့်စား။
ခြံမြေကွက်အကျယ်အဝန်းအရ စိုက်ပင် တွက်နည်း
( ဒေါက်တာချစ် စိုက်ပျိုးရေး စာအုပ်မှ…. )(၁) လျား x နံ ရှိ စိုက်ပင် အရေအတွက်ကို မြှောက်။
(၂) ခြံကွက်၏ လျား x နံ မြှောက်ကိန်း ÷ ပင်ခြား ကွာဝေးမြှောက်ကိန်းမြေကွက် လျား ၃၀၀ x နံ၂၀၀ = ၆၀၀၀၀ စတုရန်းပေ
သစ်ပင် ၁၂ ပေခြား စိုက်လျှင် ၁၂ x ၁၂ = ၁၄၄၆၀၀၀၀ ÷ ၁၄၄ = ၄၁၆ ပင်
ဖိုခနောက်ဆိုင်စိုက်လျှင် ၁၅% အပိုထွက်မည် ၄၁၆ x .၁၅ = ၆၂၄၁၆ + ၆၂= ၄၇၈ ပင်
( ၃) ဧကပြည့် ( ၁ ဧက ) တွက်လျှင်စိုက်ပင်အကွာအဝေး နှစ်ခုမြှောက်ကိန်း နှင့် ၄၃၅၆၀ ကိုစား။
စိုက်ပင်ကွာဝေး ၁၉ x ၁၉ = ၃၆၁၄၃၅၆၀ ÷ ၃၆၁ = ၁၂၀ဖိုခနောက်ဆိုင်စိုက်လျှင် ၁၂၀ x .၁၅ = ၁၈ ပင်ပိုထွက်၁၂၀ + ၁၈ = ၁၃၈ ပင်
ရဂေါလံ တှကျနညျး နှငျ့ မွဧေက တှကျနညျး၊ သဈျတဈခြောငျးကို ဘယျစြေးရောငျးရမလဲ တှကျနညျးမြား
ရဝေငျဆနျ့တှကျနညျး ၊ သဈတှကျနညျး ၊ မွတှေကျနညျး ၊ ဘိလပျမွတှေကျနညျး
အုတျရကေနျဝငျဆနျ့မှု တှကျခကျြနညျးကပိုလှယျပါတယျ အလြား×အနံ×အမွငျ့=ကုဗပေ ရတယျ
အဲဒီကုဗပနေဲ့ ၁ ကုဗပမှော ရေ ၆•၂၅ ဂါလံ နဲ့ မွှောကျ ရတာဝငျဆနျ့တဲ့ ရဂေါလံပေါ့
မွနျမာလကျသမားတို့၏သဈတှကျနညျးဝမြှေပါသညျ။ သဈတဈတနျ=၄ဝဝလက်မ သတျမှတျပါသညျ။ ဥပမာ ၂”X၁”( အရှညျ၁၈ ပေ)=၂”ဟုသတျမှတျသညျ။
၄၀၀ ÷၂= ၂၀၀ ထို့ကွောငျ့ ၂”၁”(အရှညျ၁၈ပေ) ၂၀၀ ခြောငျးသညျ တဈတနျဖွဈသညျ။ ၂”၁”(အရှညျ၁၈ပေ) ၂၀၀ ခြောငျးသညျ တဈတနျဖွဈသညျ။ ၃”၁”=၃”(အားလုံးပရှေညျ ၁၈ပမှေတျယူရပါမညျ)
၄”၁”=၄”(၁ဝဝခြောငျး) ၅”၁”=၅”(၄ဝဝစား၅ (၈ဝခြောငျး) ၆”၁”=၆”(၆၆.၆ ခြောငျး) ၊ ၃”၀.၅”=၁.၅”(၂၆.၆၆ ခြောငျး) ၄”၀.၅”=၂”(၂၀၀ ခြောငျး) ၄”x၄”=၁၆ လက်မ(၂၅ ခြောငျး)
၅”x၅”=၂၅လက်မ(၁၆ ခြောငျး) ဥပမာ။တနျဘိုး တဈတနျ=၄ဝဝဝဝဝကပျြ ၊ ၄၀၀၀၀၀%၄၀၀= ၁၀၀၀ ကပျြ(၁”တနျဘိူးဖွဈသညျ)ျ ၂”x၁၀၀၀=၂ဝဝဝဝကပျြ(၂”၁” ၁၈ပတေဈခြောငျး၏တနျဘိုးဖွစသညျ။ျ
ဥပမာ … သဈတဈတနျ ၆၅၀၀၀၀ စြေးဖွငျ့ ၄”x၂ ” (လေးနှဈ) ၁၈ ပေ တဈခြောငျး တနျဖိုးကို တှကျကွညျ့မယျ စြေးနှုံး ကိုတညျ ဒသမ သုညသုည နှဈငါး ဖွငျ့မွှောကျ (၆၅၀၀၀၀ × •၀၀၂၅ )၊ ရလဒျကို သဈ ခြောငျး ၏ ဒု × ဗကျြ (၄”×၂”) ရလဒျဖွငျ့ ပွနျ မွှောကျလိုကျပါ
ဒါဆို ၄” × ၂” (လေးနှဈ) ၁၈ပေ တဈျ ခြောငျး၏ တနျဖိုး ရပါပွီ….၆၅၀၀၀၀× .၀၀၂၅ = ၁၆၂၅၊ ၄× ၂ = × ၈
၁ ၃၀၀၀ လေးနှဈတဈခြောငျးတနျဖိုး ၁၃၀၀၀ ဖွဈပါသညျ…မညျသညျ့ ဒု ဗကျြ မညျသညျ့ စြေး နှုံး မဆို တှကျကွညျ့ နိုငျပါ သညျ။
ဘိလပျမွေ အုတျသဲကြောကျ ဘယျလောကျကုနျမလဲ မေးတတျလို့ အကွမျးတှကျလို့ရအောငျပါ။ မွနျမာပွညျ ဆောကျလုပျရေးမှာ ကငျြးနဲ့ ပွောကွပါတယျ။ ကုဗကငျြးနဲ စကှဲယားကငျြး ဆိုပွီးရှိပါတယျ။
ကုဗကငျြးက အလြား အနံ အမွငျ့ ၃ ခု မွှောကျတာပါ။ ၃ ခုမွှောကျလို့ ၁၀၀ ရရငျ ၁ ကငျြးပါ။ ၅၀ ဆို ကငျြးဝကျ ၂၅ ဆို ကငျြးတဈမတျ စသဖွငျ့ပါ။ ကုဗကငျြးကို ၉ လကျမနဲ့အထကျ အုတျစီခွငျးတို့ ကှနျကရဈလောငျးခွငျးတို့ မွကွေီးတူးခွငျးတို့မှာ အမြားဆုံးသုံးပါတယျ။
ရှိသမှြ အလြားအနံအမွငျ့တှေ လိုကျမွှောကျ ပေါငျးလိုကျရငျ ကုဗကငျြးထှကျလာပါပွီ။ မွကွေီး၁ ကငျြးဆို ၁ဝပပေတျလညျ ၁ ပေ အနကျ ရှိရပါမယျ။
1:3:6 အခြိုး ကှနျကရဈ ဘိလပျမွေ ၁၃ အိတျခနျ့ သဲကငျြးဝကျ ကြောကျ ၁ ကငျြး 1:2:4 အခြိုး ကှနျကရဈ ဘိလပျမွေ ၁၈ အိတျကြျောခနျ့ သဲကငျြးဝကျ ကြောကျ ၁ ကငျြး 1: 1-1/2 အခြိုး ကှနျကရဈ ဘိလပျမွေ ၂၅ အိတျခနျ့ သဲကငျြးဝကျ ကြောကျ၁ ကငျြးအုတျဖိနပျတှမှော အသုံးမြားတဲ့ ၉ လကျမအထကျ အုတျစီခွငျး ကုဗတဈကငျြးဆို ၁၃၅၀ လုံးဘိလပျမွကေတော့ သုံးတဲ့အခြိုးမှာမူတညျပါတယျ။
အမြားသုံးတဲ့ 1:4 အခြိုးဆို ဘိလပျမွေ ၆ အိတျနီးပါး။ သဲ ၂၈ ကငျြးတဈမတျ သာသာလောကျ။ စကှဲယားကငျြး အလြားနဲ့ အနံ ပဲမွှောကျပွီး ၁၀၀ ဆို ၁ ကငျြး။ ၄လကျမခှဲ အုတျစီခွငျး ဆေးသုတျခွငျးတို့ အမိူးမိုးခွငျးတို့ ကွှပွေားကပျခွငျးတို့မှာ သုံးပါတယျ။
နံရံတှမှော အသုံးမြားတဲ့ ၄.၅ လကျမ အုတျစီခွငျး မှာ အုတျ ၅၅၀ လုံး1:4 အခြိုး ဘိလပျမွေ 2.7 အိတျ သဲ .11 ကငျြးသံခြောငျးတဈခြောငျးဟာ ဆိုကျမှနျပါက ပေ ၄၀ ၁၂ မီတာရှိရပါတယျ။
သို့ပမေယျ့ ၃၉ပေ ၆ လကျမလောကျဆို မှနျတယျပွောရပါမယျ။ ဘာမားဖွဈကတော့ အတိအကပြွောလို့ မရပါဘူး။
တဈတနျမှာရှိရမယျ့ အခြောငျးရကေ 10 မီလီ ၃မူး ( ၃/၈) မှာ ပေ၄၀ အရှညျ ၁၃၅ ခြောငျး ၊ ၁၂ မီလီ ၅မူး ( 1/2) မှာ ၈၈ ခြောငျး ၁၆ မီလီ ၆မူး ( 5/8) မှာ ၅၃ ခြောငျး ၊ ၂၀ မီလီ ၃မတျ (3/4) မှာ ၃၃ ခြောငျး ၊ ၂၅ မီလီ ကပျြလုံးမှာ (1) မှာ ၂၁ ခြောငျးရှိပါတယျ။
ဘိလပျမွေ ၁ အိတျဟာ ၅၀ ကီလိုလေးပွီး အိတျ၂၀ ဟာ ၁ တနျပါ။ သံခြောငျးတှဆေကျဖို့လိုရငျ တိုငျတှမှော အနညျးဆုံး အဆ ၄၀ ထပျမိနစေေ ရပါမယျ။ ထုပျတှေ ယကျမတှမှောတော့ အဆ ၆၂ လောကျထိသုံးတတျပါတယျ။ ခိုခငျြရငျတော့ ၅ဝဆလောကျ ဆို ရလောကျပါတယျ။
အခုနောကျပိုငျး မီတာနဲ့သုံးလာပါတယျ။ ဆကျသှယျခကျြက၁မီတာ 1M မှာ ၃ ပေ ၃ လကျမ ၃ မူးရှိပါတယျ။ လကျသမားနဲ့ ယှဉျပွောလို့ရတဲ့အချေါပါ။ 1 M မီတာ= 3.281 ပေ ၊ 1 လကျမ= 25.4 mm မီလီမီတာ1 ( 1m X 1m) မီတာ စကှဲယား= 10.78 ပစေကှဲယား
ကှနျကရဈ 1 (1mX 1mX 1m) မီတာကြု = 35.32 ကုဗပေ Cuftရကေနျတဈခု ရဂေါလံ ဘယျလောကျရှိလဲတှကျခငျြရငျ၁ကုဗပမှော ၆.၂၄ ဂါလံရှိပါတယျ။
အလြား အနံ အမွငျ့ တဈပစေီရှိတဲ့ ပုံးတဈလုံးဟာ ရေ ၆.၂၄ ဂါလံဆနျ့ပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ၆ပအေလြား ၄ ပအေနံ ၃ ပေ အမွငျ့ရှိတဲ့ရကေနျဟာ6 X4X3X 6.24=449.28ရေ ၄၅၀ ဂါလံဆနျ့ပါတယျ။
ရတေဈဂါလံ ၁၀ ပေါငျလေးလို့ ၄၅၀၀ ပေါငျလေးပါတယျ။ ၂၂၄၀ ပေါငျ ၁ တနျလေးလို့ ၂ တနျလောကျ အလေးခြိနျရှိပါမယျ။ ရကေနျကို အပျေါမှာ ထားရငျ dead load ဝနျသေ ၂ တနျကို ခံနိုငျအောငျ သံခြောငျး ကျောလံတိုငျ ဆိုဒျ ကို သုံးရပါမယျ။ တှကျတတျလားမေးရငျတော့မသိပါဘူး။
1 ဂါလံမှာ ၄.၅၄၆ လီတာရှိပါတယျ။ အခုနောကျပိုငျး စတီးရတေိုငျကီတှကေ လီတာနဲ့ ပွထားတတျလို့ ပွနျတှကျကွညျ့လို့ရပါလိမျ့မယျ။ သဈတဈတနျဟာ၁လကျမပတျလညျ မှာ( 1 X 1) မှာ ၇၂၀၀ ပေ အရှညျရှိရပါမယျ။ ၂X၁ နှဈတဈ တဈတနျဟာ ( 7200÷2= 3600 ပအေရှညျ)3 X2တဈတနျ ( 7200÷6=1200 ပအေရှညျ)စသဖွငျ့ တှကျယူကွညျ့ပါ။
(၄) မွတှေကျနညျး မွဧေက ဖှဲ့နညျး တှကျနညျး
တဈဧက = ၄၃၅၆၀ စတုရနျးပေ ၊ လေးနားညီ စတုရနျး= လြား ၂၀၈.၇၁ ပေ x နံ ၂၀၈.၇၁ ပေ။
နှဈနားညီ စတုဂံ = လြားxနံ ÷ 43560နှဈနားပွိုငျ တွာဗီဇီယံ = ပွိုငျနား နှဈခုပေါငျး ÷၂ x နံ ÷ 43560
တိဂံ = .၅xအခွေxအမွငျ့ ÷ 43560 ၊ တွိဂံ = ½ အခွေxအမွငျ့ ÷ 43560
ထောငျ့မှနျ တွိဂံ – အခွေxအမွငျ့ = ရလာဒျ ÷ ၂ ÷ 43560 ၊ စကျဝိုငျး – အခငျြးဝကျx အခငျြးဝကျx 3.1416 ÷ 43560
စကျဝိုငျး – အခငျြးxအခငျြးx .၇၈၅၄ ÷ 43560 ၊ပုံသေ မွှောကျကိနျး .၇၈၅၄.၇၈၅၄ သညျ ပိုငျကိနျး ၃.၁၄၁၆ ကို (အနားလေးဖကျ) ၄ နှငျ့စားပွီး စတုရနျးကှကျ ဖျေါသညျ။
အနားငါးမကျြနှာ ၆မကျြနှာနှငျ့ အနားမြားစှာ = စတုဂံ စတုရနျး တွိဂံစသညျ အကှကျစိပျ ပွီးတှကျ ရလာဒျအားလုံးကိုပေါငျး၍ ၄၃၅၆၀ ဖွငျ့စား။
ခွံမွကှေကျအကယျြအဝနျးအရ စိုကျပငျ တှကျနညျး
( ဒေါကျတာခဈြ စိုကျပြိုးရေး စာအုပျမှ…. )(၁) လြား x နံ ရှိ စိုကျပငျ အရအေတှကျကို မွှောကျ။
(၂) ခွံကှကျ၏ လြား x နံ မွှောကျကိနျး ÷ ပငျခွား ကှာဝေးမွှောကျကိနျးမွကှေကျ လြား ၃၀၀ x နံ၂၀၀ = ၆၀၀၀၀ စတုရနျးပေ
သဈပငျ ၁၂ ပခွေား စိုကျလြှငျ ၁၂ x ၁၂ = ၁၄၄၆၀၀၀၀ ÷ ၁၄၄ = ၄၁၆ ပငျ
ဖိုခနောကျဆိုငျစိုကျလြှငျ ၁၅% အပိုထှကျမညျ ၄၁၆ x .၁၅ = ၆၂၄၁၆ + ၆၂= ၄၇၈ ပငျ
( ၃) ဧကပွညျ့ ( ၁ ဧက ) တှကျလြှငျစိုကျပငျအကှာအဝေး နှဈခုမွှောကျကိနျး နှငျ့ ၄၃၅၆၀ ကိုစား။
စိုကျပငျကှာဝေး ၁၉ x ၁၉ = ၃၆၁၄၃၅၆၀ ÷ ၃၆၁ = ၁၂ဝဖိုခနောကျဆိုငျစိုကျလြှငျ ၁၂၀ x .၁၅ = ၁၈ ပငျပိုထှကျ၁၂၀ + ၁၈ = ၁၃၈ ပငျ
ဦးဘုန်း(ဓါတု)ရဲ့ အတွေးအခေါ်များ (၁) အစားထိုးမရတဲ့ ဆုံးရှုံးမှု (၂)ခု ရှိတယ်။ မိဘနှင့်အချိန်။ (၂) လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဘုန်းတန်ခိုးဟာ အလုပ် လုပ်ခြင်းပဲ။ (၃) ဆင်ခြေပေးတဲ့ ပါးစပ် ထမင်းငတ် တတ်တယ်။ (၄) မလုပ်တတ်ကြောင်း များများပြောလေ မလုပ်တတ်လေ။ (၅) နှေးတာ အရေးမကြီးဘူး၊ ရပ်မနေဖို့ပဲ အရေးကြီးတယ်။ (၆) လိုသလောက် မရနိုင်ပေမယ့် လုပ်သလောက်တော့ ရနိုင်ပါတယ်။ (၇) မေ့တယ်ဆိုတာ မလေးစားလို့၊ ကြောက်တယ်ဆိုတာ မခိုင်လုံလို့။ (၈) အလုပ် မလုပ်ပဲ အခွင့်အရေး မရချင်ပါနှင့်။ (၉) မနာလို မဖြစ်ပါနဲ့၊ လုပ်တဲ့လူက နေရာရမှာပဲ။ (၁၀) လူတစ်ယောက်၏ အကျင့်စာရိတ္တသည် …
ဘယ်လိုအချိန်မှာ မိန်းမတွေဟာ ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ ယောက်ျားနဲ့ တွေ့တတ်လဲ …..?
ဘယ်လိုအချိန်မှာ မိန်းမတွေဟာ ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ ယောက်ျားနဲ့ တွေ့တတ်လဲ …..? မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ အကုသိုလ်ကံ လောကမှာ ယောကျာ်းနဲ့ မိန်းမ တွေ့ကြုံဆုံကွဲ ဖြစ်ကြရတာ ဓမ္မတာပါ… ဘာထူးဆန်းလို့လဲလို့ မေးချင်စရာ… ဟုတ်တယ်.. မထူးဆန်းဘူး… ထူးဆန်းတာတာကတော့… အဲဒီမိန်းမတစ်ယောက်ဟာ…ကိုယ့်အပေါ် သစ္စာမရှိ…တန်ဖိုးမထား… ကိုယ့်အပြင် အခြား အခြားသော မိန်းမတကာ မိန်းမတွေကို လစ်ရင်တွယ်…ချောင်ရင်နှိုက်… ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ ယောကျာ်းကို ရထားပြီဆိုရင်တော့…အဲဒါ….ထူးဆန်းနေပြီ… ကျွန်မငယ်ရွယ်စဉ် စိတ်ဓာတ်မရင့်ကျက်ခင်ကာလတွေ… တရားတွေ ကို နားနဲ့ပဲနာခဲ့ပြီး နှလုံးသားနဲ့ မနာတတ်ခင်ကာလတွေတုန်းက… ယောကျာ်းတစ်ယောက် ကိုယ့်ကို ဖောက်ပြန်တာ ခံရပြီဆို.. ပထမဦးဆုံး… သူ့ကိုဒေါသထွက်တယ် ဒုတိယ… ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဒေါသထွက်တယ် တတိယ… သူနဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ မိန်းမကို ဒေါသထွက်တယ် …
“ပင်စိမ်းပင် အိမ်မှာ စိုက်ပျိုးသင့်သော အကြောင်းရင်း”
“ပင်စိမ်းပင် အိမ်မှာ စိုက်ပျိုးသင့်သော အကြောင်းရင်း” 1. ပင်စိမ်း အရွက် ကို နေ တိုင်း စား ပေး ခြင်း အား ဖြင့် အူ လမ်း ကြောင်း ဝမ်း ဗိုက် နှင့် ပါး စပ် တွင် ဖြစ် တက် သော ရော ဂါ များ ကင်း ဝေး ပီး အ စာ ခြေ စ နစ် ကို ကောင်း မွန်စေ ပါ သည် ။ 2. ပင်စိမ်း အရွက်ကို ရေထဲတွင်စိမ်ပြီး နေတိုင်း သောက်လာပါက …
This Month : 46639
This Year : 100722
Total Users : 395855
Total views : 1428047